Public Health Concern स्तनपान सम्बन्धि बिशेष स्वास्थ्य शिक्षा : परिचय,महत्व,फाईदा/बेफाईदा, सहि आसन,गलत धराणा, ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु लगायत धेरै जानकारी समेटिएको / – Public Health Concern
स्तनपान (Breast Feeding) आमाले शिशुलाई जन्म दिएपछि आफ्नो स्तन बाट निस्कने प्राकृतिक दूध चुसाउने क्रिया हो । गर्भधारणको प्रक्रियासँगै आमाको स्तनमा दूध बहन्न थालेको हुन्छ । पहिलो बिगौते दूध बच्चाको लागि अमृत समान हुन्छ, त्यसले बच्चालाई धेरै रोगहरूबाट लड्नसक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । स्तनपान र सघनतालाई परिवार नियोजनको माध्मको रूपमा पनि लिइन्छ । जति बढि पटक आमाले दूध चुसाउछिन् त्यतिनै बढि अस्थाइ बाँजोपानको अवधि बढेर जान्छ । यो कार्य ज्यादै पुरानो प्रचलन हुनुका सथै प्राकृतिक र स्वस्थकर पनि छ ।
स्तनपान गर्ने, गराउने चलन संसारमा स्तनधारीहरूको विकास जहिलेदेखि भयो उहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । तर विश्वमा आएका अनेक परिर्वतनहरूका कारण स्तनपान गराउने प्रचलन घटेको देखिएको छ । यही कारण स्तनपान गराउने प्रचलनलाई निरन्तरता दिन बेलाबेलामा महिलाहरूका लागि सूचनाको पनि आवश्यकता अनुभव गरिएको छ ।
स्तनपान सबै स्तनधारी प्राणीहरूमा साधारण क्रिया हो । स्तनपान शिशुको लागि संरक्षण र संवर्धनको काम गर्दछ । नवजात शिशुमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुदैन । आमाको दूधबाट यो शक्ति शिशुलाई प्राप्त हुन्छ । आमाको दूधमा लेक्टोफोर्मिन नामक तत्व हुन्छ, जो बच्चाहरूको शरीरमामा फलाम तत्त्व दिन्छ फलाम तत्त्वको अभावमा शिशुको शरीरमा किटाणु प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । आमाको दूध देखि आएका साधारण जीवाणु बच्चाहरूको शरीरमा उब्जने रोगसँग प्रतिरोध गरेर उनीहरूको रक्षा गर्दछन् । आमाको दूधमा रोगाणु नाशक तत्त्व हुन्छन् । वातावरण देखि आमाको शरीरमा पुगेको रोगाणु, शरीरमा स्थित विशेष भागको संपर्कमा आउछन्, जो उन रोगाणु-विशेषको बिरुद्ध प्रतिरोधात्मक तत्व बनाछन । यो तत्व एक विशेष नलिका थोरासिक डक्टबाट सीधा आमाको स्तन सम्म पुग्छन र दूध बाट बच्चाहरूको पेट मा । यस तरिकाले बच्चा आमाको दूध खाएर सदा स्वस्थ रहन्छ ।
जुन बच्चा बाल्यकालमा पर्याप्त रूपले आमाको दूध खान पाउँदैन बाल्यकालमा शुरू हुने डायबिटीजको रोग अधिक हुन्छ । उनमा अपेक्षाकृत बुद्धि विकास कम हुन्छ । यदि बच्चा महिना नपुगि जन्मेको (प्रीमेच्योर) छ भनेँ त उसलाई शरीरको घातक रोग, नेक्रोटाइजिङ्ग एन्टोरोकोलाईटिस हुन सक्छ । यसैले छ-आठ महिना सम्म बच्चाहरूको लागि आमाको दूध श्रेष्ठ आहार मात्र हैन, जीवन रक्षक पनि हुन्छ ।
गलत धारणा :
केही मानिसमा स्तनपान गराउँदा सौन्दर्यमा ह्रास आउने, शरीरको तौल घट्ने, स्तनको आकार बिग्रने आदि कारण रहेको पाइन्छ । तर यो कुरा साँचो होइन । आधुनिक विज्ञानले यो कुरा गलत साबित गरेको छ । बरू यसले शिशुको उपचार तथा खाना खर्चमा ५० प्रतिशत कम गरेको पाइएको छ । आमाले शिशुलाई स्तनपान गराउँदा आत्मीयता, भावनात्मक सुखानुभूति, गौरव, मानसिक रूपमा स्वस्थ एवं आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । यिनै कुरालाई मनन गरेर चीनले शिशुहरूलाई बट्टाको दूध सेवनमा कानुनी रूपमै रोक लगाएको छ ।
पाउडर दूध बनाउने कम्पनीहरू सबै आमाले पाउडारलाई स्तनपानको सट्टा पाउडर दूध खुवाउन् भन्ने चाहन्छन् तर बोतल र कृत्रिम दूधको प्रयोग ज्यादै हानिकारक हुन्छ । पाउडर दूध खुवाउँदा लाखौ बच्चाहरू कुपोषित वा बिरामी परेका छन् वा मृत्यु भएको छ ।
पाउडर वा टिनको र गाईबस्तुको दूधले बच्चालाई रोगबाट बचाउन सक्दैन ।
यस्तो दूधले बच्चालाई रोग लगाउन र ज्यान लिन सक्छ । पाउडर दूध खुवाउँदा दुधदानी वा त्यसमा मिसाइने पानी राम्ररी उमालिएन भने बच्चाले हानिकारक किटाणु निल्छ र पखाला लाग्छ ।
पाउडर दूध धेरै महँगो हुन्छ । एउटा बच्चालाई पहिलो वर्ष नै कम्तीमा ४० किलो पाउडर चाहिन्छ ।
स्तनपानको फाइदा :
आमाको दूध मात्रै पोषणको लागि नभएर जीवनको धारा हो । यसले आमा र बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । शिशुलाई जन्मेको छ महिना सम्म मात्र स्तनपानमा नै निर्भर राख्नुपर्छ । यो शिशुको जीवनको लागि जरूरी छ, किनकी आमाको दूध सुपाच्य हुन्छ र यसले पेटको गडबडीको पनि डर हुँदैन । आमाको दूध शिशुको प्रतिरोधक क्षमता बढाउनमा पनि सहायक हुन्छ । स्तनपानले दम र कानको रोगमा नियन्त्रण कायम हुन्छ, किनकी आमाको दूध शिशुको नाक र घाँटीमा प्रतिरोधी छाला बनाइदिन्छ ।
केही शिशुलाई गाईको दूधले एलर्जी हुन सक्छ । यसको विपरीत आमाको दूध शत-प्रतिशत सुरक्षित छ । अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ कि स्तनपान गर्ने बच्चाहरू त्यस पछि अन्न खुवाउँदा पनि असुहाउँदो मोटो हुँदैनन् । यो शायद यस कारण बाट हुन्छ कि तिनीहरूलाई शुरू देखि नै आवश्यकता भन्दा अधिक खानाको बानी पर्दैन । स्तनपानबाट देखि जीवनका पछिको चरणहरूमा रक्त क्यान्सर, मधुमेह र उच्च रक्तचापको खतरा कम हुन्छ । स्तनपानले शिशुको बौद्धिक क्षमता पनि बृद्धि हुन्छ । यसको कारण यो हो कि स्तनपान गराउने आमा र उनको शिशुको बीच भावनात्मक सम्बन्ध धेरै मजबुत हुन्छ । यस वाहेक आमाको दूधमा धेरै प्रकारको प्राकृतिक रसायन पनि हुन्छन् ।
बच्चालाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त पार्ने सबभन्दा उत्तम आहार आमाको दूध हो ।
स्तनपानले सुत्केरी भैसकेपछि रगत जाने प्रक्रियालाई रोक्छ ।
स्तनपानले बच्चालाई मधुमेह, क्यान्सर, पखाला र निमोनियाजस्ता बिमार र संक्रमणबाट बचाउँछ ।
दूधबाट आमाको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बच्चामा सर्छ ।
स्तनपानले आमालाई क्यान्सर र हड्डी कमजोर (ओस्टेओपोरोसिस् । हुने रोगबाट जोगाउँछ) ।
आमाको दूध जहिले पनि बच्चाका लागि सफा, तयार र सही तापक्रममा रहेको हुन्छ ।
स्तनपानले आमा र बच्चा दुवैलाई आत्मीय र सुरक्षित भएको अनुभूति दिन्छ ।
कतिपय महिलालाई स्तनपानले चाँडै गर्भवती हुनबाट बचाउँछ ।
स्तनपान गराउन खर्च लाग्दैन ।
स्तनपानलाई प्रोत्साहन :
विश्वका विभिन्न देशहरूले स्तनपानका लागि प्रोत्साहन गरेका हुन्छन् । विगत १९ वर्षदेखि स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष अगस्ट महिनाको पहिलो हप्तालाई स्तनपान हप्ताको रूपमा मनाइने गरिएको छ ।
स्तनपान गराउने तरिका :
नवजातं शिशुलाई :
आमाले बच्चा जन्मनेबित्तिकै दूध खुवाउनुपर्छ । त्यसले पाठेघरको मुख खुम्चन्छ र रक्तस्राव रोकेर सामान्य स्थितिमा ल्याउन मद्दत गर्छ । दूध चुसाइले दूधको प्रवाहलाई बढाउँछ ।
कुनै पनि बच्चालाई बच्चालाई :
स्तनपान गराउँदा समस्या पथ्र्यो भने अन्य अनुभवी महिलाको सहयोग लिनुहोस् । उनले कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले भन्दा राम्रो सल्लाह दिन सक्छिन् । जस्तै समस्या परे पनि दुधदानीको प्रयोग नगर्नुहोस्, यसले बच्चालाई अर्के प्रकारको दुध चुस्ने बानी पार्छ । स्तनपान गराउने नै प्रयास गर्नुहोस् । कुनै बेला राम्रो विधि सिक्न आमालाई समय लाग्छ भने कुनै बेला राम्ररी दूध चुस्न सिक्न बच्चालाई समय लाग्छ ।
बच्चालाई ढच्याउ गराउने :
नवजात शिशु जन्मिएको एक घण्टाभित्र नै आमाको पहिलो पहेँलो (बिगौती) दूध खुवाउनुपर्दछ ।पहेँलो दूधले खोप सरह शिशुलाई रोगबाट बचाउँछ । साथै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ ।“
१. सकेसम्म आमाले निहुरिएर स्तनपान गराउनु हुँदैन । यसरी स्तनपान गराउँदा बच्चाको कानमा दूध पस्ने सम्भावना हुन्छ ।
२. आमाले सुतेर पनि स्तनपान गराउनु हुन्न । सुतेर स्तनपान गराउँदा आमाको स्तनले नाक थुनिएर सास फेर्न गाह्रो भई बच्चाको मृत्यु समेत हुनसक्छ ।
३. दूध खाइसकेपछि बच्चालाई माथि उठाएर डकार गराउनु पर्छ । बच्चाले दूधसँगै हावा पनि तान्ने भएकाले डकार्दा हावा बाहिर फालिन्छ, अनि खाएको दूध स्वच्छ भई बान्ता हुनबाट पनि रोकिन्छ ।
४. राति बच्चालाई सुताउँदा बच्चाको मुखमा निप्पल राखिराख्नु हँुदैन । यसले संक्रमण गराउन सक्छ ।
५. स्तन वरपर घाउ, खटिरा आएमा त्यही स्तन निचोरेर दूध लगाएमा औषधिको काम गर्ने गर्छ ।
६. बच्चाले दूध चुस्न नसके स्तन निचोर्नुपर्छ । नत्र डल्लो पर्ने पाक्ने सम्भावना हुन्छ ।
७. समय नपुगी जन्मेको बच्चालाई धेरै समय बसेको आमाको दूध खुवाउनु हुँदैन । त्यो दूध निकै बाक्लो हुने भएकाले एकैपटक बच्चाले पचाउन सक्दैन । सुरुको दूध फालेर मात्रै खुवाउनुपर्छ ।
८. सकेसम्म बोतलको दूध बच्चालाई खुवाउनु हुँदैन । खुवाउनै पर्ने बाध्यता भए चम्चामार्फत खुवाउनुपर्छ । किनकी बोतलको सरसफाई नपुगेमा बच्चालाई संक्रमण भई डाएरिया भैरहने र ईन्फेक्सन हुनसक्छ ।
९. यदि आमाको दूध नआएमा गाई भैंसीको दूध खुवाउने गर्नुपर्छ । सकेसम्म बजारको दूध खुवाउनु हुन्न ।
स्तनपानका लागि सहि स्थिति :
बच्चालाई दुध चुस्न असजिलो भएको कुरा थाहा पाउने तरिका :
बच्चाले छटपट गर्छ वा रुन्छ र दूध चुस्न मान्दैन भने ऊ असजिलो अवस्थामा छ ।
बच्च को शरीर आमातिर फर्केको छैन वा स्तनमा मुख पुयाउँदा टाउको बाङ्गिएको छ भने ऊ सजिलो अवस्थामा छैन । यस्तो अवस्थामा बच्चाले दूध चुस्न नसक्ने हुन्छ ।
मुन्टाको वरिपरिको खैरो भाग धेरै नै दे खएको छ भने बच्चाको मुखमा राम्ररी स्तन परेको छैन ।
बच्चाले दूध चुस्दा आवाज आउँछ र छिटो-छिटो तान्छ भने पनि स्तन राम्ररी मुखमा परेको छैन । मा बच्चाको मुखमा स्तन राम्ररी राखिदिनुपर्छ । त्यसपछि उसले बिस्तारै र गहिरो गरी तान्छ र यस्त राम्ररी निल्छ ।
आमालाई पीडा हुन्छ र मुन्टामा घाउ छ भने मुन्टालाई अलि भित्र राख्नुपर्छ ।
स्तनपान गराउने आमाको आहारा :
आमाले सुत्केरीबाट उठ्न, बच्चाको राम्रो हेरचार गर्न र तिनले गर्नुपर्ने कामहरू गर्नका लागि राम्ररी खानुपर्छ । उनीहरूलाई प्रोटिन तथा चिल्लो पदार्थयुक्त खानाका साथै प्रशस्त सागसब्जी र फलफूलको आवश्यकता पर्छ । उनीहरूलाई सफा पानी, दूध, ज्वानोको झोल, सुप र जुसजस्ता तरल पदार्थ पनि प्रशस्त चाहिन्छ । यी विभिन्न आहारले आमाको शरी बनाइरहेको हुन्छ ।
स्तनपान गराउने आमा गर्भवती भएको अवस्थामा
बिरामी वा स्वास्थ्य कमजोर भएको अवस्थामा ।
दुई वर्षभन्दा कम समयमै अर्को गर्भ रहेको अवस्थामा
विशेष अवस्थाका नानीहरूलाई स्तनपान :
ज्यादै साना अथवा कम तौल भएका शिशु : शिशुले राम्रोसँग दूध चुस्न सकेन भने दूधलाई हातैले निचोरेर चम्चा वा कपले खुवाउनुपर्छ । बच्चा जन्मनेबित्तिकै देखि यो क्रम सुरु गर्नुपर्छ र आफै चुस्नसक्ने नहुन्जेलसम्म यस्तो गरिरहनुपर्छ । यसो गर्दा स्तनमा अरू बढी दूध उत्पादन हुन्छ । बच्चा जन्मदा उसको वजन १.५ (डेढ) किलो ग्राम (३.५ (साढे तीन) पाउन्ड) भन्दा कम छ भने उसलाई नाकदेखि पेटसम्मको एउटा पाइप राखेर अरू विभिन्न विशेष उपचार गर्नु आवश्यक पर्छ । आमाको दूध त्यो पाइपद्वारा दिइन्छ । यसबारे स्वास्थ्य कार्यकर्तासँग कुरा गर्नुहोस् ।
महिना नपुगी जन्मेको बच्चा : बच्चा बच्चालाई धेरै न्यानो चाहिन्छ । उसलाई न्यानो कपडाले बेरेर तपाईंको स्तनसँगै छातीमा राख्नुहोस् । कतिपय ठाउँमा यस तरिकालाई कङ्गारु हेरचाह’ पनि भनिन्छ । कपडाभित्र आमा र बच्चाको छालाको स्पर्श हुनुपर्छ र दूध चुसाइरहनु पर्छ । राम्ररी दुध चुस्न नसके हातले निकालेको दूध खुवाउनु पर्छ ।
ओठ र तालु खुँडे भएको बच्चा : यस्ता बच्चाहरूलाई दुध चुस्नका लागि विशेष सहयोग चाहिन्छ । ओठभित्र मात्र धाजा फाटेको छ भने त उसले राम्रैसँग चुस्न सक्छ । (दुध खुवाउँदा ओठ फाटेको ठाउँमा आफ्नो हातको औंला राखिदिनुहोस् । तर तालु नै खुला छ भने दूध खुवाउँदा उसलाई सिधा पारेर राख्नुहोस् । यतिखेर तपाईंलाई विशेष सहयोग चाहिन सक्छ । बच्चाले स्तन च्यापेपछि आमाले हातैले दूध निचोरेर मुखमा झारिदिनुपर्छ ।
कमलपित्त भएको शिशु : कमलपित्त भएको बच्चालाई आमाको दूध र घामको किरण पर्याप्त चाहिन्छ । यो रोग लागेमा कुनै-कुनै बच्चाहरू धेरै निदाउने गर्छन् । धेरै निदाउने बच्चालाई हातैले निकालेको दूध २४ घण्टामा कम्तीमा १० पटक खुवाउनुपर्छ । नागो पारेर बच्चालाई विहान र डुब्नु अघिको घाममा राख्नुपर्छ अथवा धेरै उज्यालो कोठामा राख्नुपर्छ ।
जुम्ल्याहा बच्चा : जुम्ल्याहाहरूमा एउटा चाहिं कमजोर भएर जन्मेको हुनसक्छ । यस्तोमा दुवै बच्चाले आमाको दूध प्रशस्त खान पाउनुपर्छ । जुम्ल्याहा बच्चाको आमाले दुवैलाई पुग्ने प्रशस्त दूध बनाउन सक्छिन् ।
बच्चा बिरामी हुँदा :
बच्चा बिरामी हुँदा स्तनपान रोक्नु हुँदैन । स्तनपान गराईराखेमा मात्र चाडै स्वास्थ हुन्छ ।
झाडापखाला बच्चाहरूका लागि खतरनाक हुन्छ । यस्तो बेलामा औषधिभन्दा पनि हेरचाह नै प्रभावकारी हुन्छ किनभने धेरैजसो बच्चाहरु पानी नपुगी जलवियोजन (dehydration) का कारणले मर्छन् ।
पखाला लागेको बेला छिटो-छिटो दूध खुवाउने र थप पानी पिलाउने ।
बच्चा कमजोर छ भने दूध खुवाइरहनुहोस् । बच्चाले दूध नचुसे हातैले निकालेर खुवाउने र स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई देखाउने ।
बच्चालाई वान्ता हुँदा थोरै-थोरै मात्रामा छिटो-छिटो खुवाउनुपर्छ । प्रत्येक ५ देखि १० मिनेटभित्रमा बच्चालाई चम्चाले थप पानी दिइरहनुपर्छ । मौका पर्नेबित्तिकै स्वास्थ्य कार्यकर्तासँग सल्लाह लिनुपर्छ किनभने जल वियोजनले बच्चा मर्न सक्छ ।
बच्चालाई अस्पताल लगेपछि पनि स्तनपान गराइराख्नुपर्छ । यदि तपाईं – अस्पतालमा बस्न नसक्ने आमाले भने आफ्नो दूध निचोरेर भाँडामा वा पनर्जलीय तरल पदार्थ बोतलमा राखी खुवाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
बच्चालाई चम्चा वा कपले कसरी खुवाउने :
सानो कप वा चम्चा प्रयोग गर्नुहोस् । उमाल्ने व्यवस्था नभए कप वा चम्चालाई साबुनपानीले राम्ररी धुनुपर्छ ।
बच्चालाई काखमा लगभग सिधा गरी राख्नुहोस् ।
सानो कप वा चम्चाले दूध बच्चाको ओठमा पर्ने गरी बिस्तारै राख्नुहोस् ।
मुखमा दूध नखन्याउनुहोस्, बच्चा आफैले त्यसलाई तानोस् । धेरैजसो साना राम्रो हुन्छ ।
आमा बिरामी हुँदा :
बिरामी आमाले पनि सकेसम्म बच्चालाई अन्य आहाराको सट्टा स्तनपान नै गराउनुपर्छ । आमालाई यदि धेरै ज्वरो र पसिना आएमा दूध कम बन्छ ।
यसो हुनबाट जोगिनका लागि:
तरल पदार्थ धेरै पिउनुहोस् ।
स्तनपान गराइरहनुहोस् ।
सुतेर स्तनपान गराउनुपर्छ
हातले दूध निकाल्नुपर्छ (आवश्यक परे अरूको मद्दत लिने)
बच्चालाई संक्रमणबाट बचाउन स्तन वा बच्चालाई छुनुअगाडि साबुन पानीले राम्रोसँग आफ्नो हात धुनुहोस् ।
आमाले औषधि प्रयोग गदा :
धेरैजसो औषधिहरू ज्यादै कम मात्रामा मात्र दूधमा जाने हुनाले यिनीहरूले बच्चालाई असर गर्दैनन् । बरु स्तनपान रोकियो भने बच्चालाई नोक्सान हुन्छ । तर कुनै-कुनै औषधिहरूका खराब असर हुन्छन् । यस पुस्तकमा त्यस्ता औषधिहरूका चेतावनीको सङ्केतका साथै सुरक्षित औषधिहरूको सुझाव दिइएको छ । गराइरहेको कुरा उनलाई बताउनुहोस् । यसबाट नराम्रो औषधिको प्रयोग गर्नबाट बचिन्छ ।
आमा पुनः गर्भवती हुँदा वा अकों बच्चा जन्मदा बच्चा भएकी आमा गर्भवती भइन् भने पनि उनले स्तनपान गराइरहन सक्छिन् तर यो बेलामा उनले धेरै पोषणयुक्त खाना खानु पर्छ ।
परिवर्तनका लागि गर्न सकिने कामहरू :
समस्या आउनुभन्दा अगाडि महिलाहरूलाई स्तनपानका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।दूध पर्याप्त छ भन्ने कुरा बुझन उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सधैं आइपर्ने समस्याका बारेमा आमा-आमाबीच भएको छलफल बढी प्रभावकारी हुन्छ । जसले बढी दूध खुवाएको छ वा जसको बच्चा बढी सप्रेको छ त्यस्ता आमाको नेतृत्वमा दूध खुवाउने आमाहरूको समूह खोल्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तनपान गराउने आमाहरूका लागि बढी मित्रवत बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।बच्चा जन्मनेबित्तिकै दूध चुसाउन आमाहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ । आमालाई बच्चासँग सुत्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आमा बिरामी पर्दा पनि बच्चा साथैमा रहोस् ।
तपाईं स्वयं आमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराएर कसरी स्तनपान गराउँदै पनि काम गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनुहोस् ।
नोट : कृपया जनचेतनाको लागि शेयर गर्न नभुल्नुहोला /